China Manual Road akara Machine factory na suppliers | ACE igwe
Manual Road akara Machine
ACE nwere ike ịnye igwe akara akara ngosi dị elu. Igwe Ntugharị Aka bụ otu n'ime isi igwe maka akara nchacha thermo. Markdị akara akara na-adabere na nkwụsi ike nke igwe na arụmọrụ nke akara hopper, nke gosipụtara ọdịiche dị na arụmọrụ nke igwe.
Thermoplastic Road Marking Machine ejiri ya maka akara akara ngosi (akara kwụ ọtọ, akara akara, akara akụ, leta na akara) n'okporo ụzọ dị n'okporo ụzọ, n'okporo ámá obodo, ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ ọrụ na ụlọ nkwakọba ihe. Ọ nwere ihe abụọ ụdị nke Hand Push na akpaka otu (engine chụpụrụ).
Aka Push Marking Machine (Screed ụdị)
Kpuchie Ihe na-ekpo ọkụ
Injin Akwụkwọ ntuziaka, enweghị injin
Akụkụ 1200 mm * 900 mm * 900mm
Mmepụta ikike Banyere 1500m / h maka akara ọkọlọtọ na-aga n'ihu
Agba ọkpụrụkpụ 1.2-4mm
Obosara Obosara 100mm, 150mm, 200mm
Ndozi okpomọkụ nke agba 170-220 ℃
Obosara akara 50,80,100,120,150,200,230,250,300mm, wdg. Igwe ahụ ka adabara akara akara zebra 450mm.
Ike tankị maka thermoplastic 105kg
Ọrụ Nọgidenụ gbazee agba na-ekpo ọkụ na akara akara.
Total arọ nke igwe 125kg
Ike nke igbe beads igbe 25kg
Ikwute usoro dispensing Gear-akwagharị, Akpaghị aka ipigide
Na-arụ ọrụ na preheater Eeh
Efficiencyrụ ọrụ kwa ụbọchị 1000 m2
Nwere ike kwadebe na boosting ọkwọ ụgbọala, boosting efere, boosting oche？ Mbanye Boosting (ya na Injin)
Main Akụkụ nke Thermoplastic Road Marking Machine:
Site na ngbanwe ike ndọda, wiilị gbatịrị agbatị gbasaa, Igwe Marking na-akwụsi ike karịa nke ọdịnala mgbe ị na-agafe akara 450mm zebra.
Site na ule ike ndọda ugboro ugboro, chegharia ọhụụ ọhụrụ, igwe ọrụ akara ọkụ na-adị mfe karị, belata ọrụ onye ọrụ. Yabụ ọrụ akara akara na-adịwanye mfe ma dị irè karị.
3.Mfe iji rụọ ọrụ:
Akara hopper si arụ ọrụ dịgasị obere si 300mm ka 200mm, ọzọ n'ụzọ ziri ezi, mfe ịchịkwa, Ya mere nsogbu ndị dị otú ahụ dị ka onye na-adịghị hopper ndọrọ ego na mkpumkpu finishing akara onu na-edozi. A na-eji ọtụtụ ihe eji eme ihe na-eme ihe iji zere ndị amoosu ihe na-apụtakarị na ngwaahịa ndị yiri ya n'ihi akụkụ abụọ ahụ akpọchiri akpọchi na nnukwu nrụrụ n'etiti ngwaahịa ahụ.
1.Gịnị banyere mbupu ahụ?
A: Ọ bụ na nhọrọ gị. Ọtụtụ mgbe, anyị na-akwado ụgbọ mmiri nke na-enye ọnụahịa ezi uche dị na ya. Ọzọkwa, maka akụkụ ndị ọzọ, ọ nwere ike ịbụ na FEDX, DHL na nkwupụta mba ha.
3. Enwere m ike ịhazi ọkpụrụkpụ ahịrị? Oleekwa otú?
4.Could ị nwere ike ịmepụta igwe ahaziri iche?
A: Ee, anyị nwere ike. Anyị bụ ndị na emeputa nke thermoplastic ụzọ marking igwe na Guangzhou City ..
Nke gara aga: All-na-na-otu ụzọ marking igwe
Osote: 65kgs na 10.5kn jijiji ike efere Compactor
GW42E-GW50E Automdị akpaaka
Steel mmanya cutter GQ40
45mm 13 / 4inch Japanese ụdị ihe vibrator s ...
GW40A 2.2KW Ntuziaka ụdị